Marina Dredging-Maxay Tahay Sababta Looga Baahan Yahay-Ellicott Dredges
Waa maxay Marina Dredging?
Qodista Marina waxay ka kooban tahay haynta qoto dheer ee marinka marinka waxayna muhiim u tahay maraakiibta sida doonyaha, doomaha, adeegyada degdegga ah, iyo doonyaha gaarka loo leeyahay ee dhex mushaaxaya marina. Qodista marinada joogtada ah waxay hubisaa marinka nabdoon ee doomaha doonta iyo dibaddaba, marina waxay ku shaqeysaa awooda ugu badan sanadka, waxayna ilaalisaa deegaanka.
Badiba marinasyada badanaa waxay ku yaalliin banka a webiga, u dhow a harada, ama aagga dekedda xeebta. Maraakiibta waxay u adeegaan gabbaad milkiileyaasha doonta, hawl wadeenada ganacsiga, iyo shirkadaha doomaha kirada ah kuwaas oo doonaya inay maraakiibtooda ka difaacaan dabeylaha duufaanka iyo hirarka garaacaya. Waqti ka dib, carrada, ciidda, iyo ceelku waxay ku urursan yihiin marinnada oo dhan iyadoo ay sabab u tahay qulqulka biyaha oo gaabis ah, taas oo keeneysa in doomaha ay dhulka ku soo dhacaan, oo waxyeello u geysato doomaha doomaha iyo xaddididda awoodda markab ee ay ku mari karto marina si ammaan ah. Halkii ay iska indhatiri lahaayeen dhibaatada, waxaa muhiim ah in milkiilayaasha marinnada ay dhaqso u dhaqmaan, halkii ay ka dambeyn lahaayeen.
Biyo la'aantu waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta qoto dheer kanaalka iyada oo meesha laga saarayo agabyada dabiiciga ah ee ku soo urursada gunta badda. Alaabada laga soo ururiyo marina inta lagu gudajiro socodka waxaa badanaa loo istcimaali karaa buuxinta xeebaha deegaanka.
Muxuu Yahay Dhibaatada Marina Ku Leeedahay Ganacsiga?
Dhawrkii sano ee la soo dhaafey, waxaan aragnay tiro sii kordheysa oo marinno gaar loo leeyahay iyo kuwo dalxiis oo dabiici ah oo soo bandhigaya adeeg hal-joogsi ah oo loogu talagalay biyaha caadiga ah. Xarumahan casriga ah waxay bixiyaan hoy afar xidigle ah, cunno wanaagsan, waraaqo waaweyn oo waaweyn, adeegyo faahfaahinta doonyaha, iyo xarumaha shidaalka lagu shubto oo malaayiin doolar u soo saara milkiileyaasha marinnada iyo hawlwadeennada marinnada.
Si kastaba ha noqotee, qashinka sida qashin-qubka waxaa loo yaqaanaa inay isku urursadaan waqti ka dib marinka marinka taasoo ka dhigaysa mid adag ama aan macquul ahayn milkiileyaasha doonta inay maraakiibtooda ka saaraan qulqulka. Haysashada barnaamij dayactir joogto ah ayaa muhiim u ah milkiilayaasha marinnada iyo macaamiisha ay u adeegaanba. Haddii kale, milkiilayaasha marinnada waxaa lagu qasbay inay xiraan waraaqaha doonyaha, oo macaamiisha aan faraxsanayn ganacsigooda u kaxaystaan ​​meelo kale.
Mid ka mid ah faa iidooyinka badda qulqulaya waxaa ka mid ah daqliga lagu soo daray khadadka la heli karo ee doonyaha yar yar iyo weynba.
Sida dhammaan dhaqdhaqaaqa guuleysta, macaamiisha qanacsani waxay horseedi doonaan ganacsi horumarsan.
Marka lagu daro kor u qaadista hagidda, qodidda ayaa muhiim u ah ilaalinta marinnada bey'ada amni ahaan u wanaagsan. Qodista dayactirka joogtada ah ayaa sidoo kale loo yaqaanay inay gacan ka geysato hagaajinta tayada biyaha iyo xaaladaha deegaanka. Marino si qallafsan u qalalan waxay yareynaysaa suurtagalnimada in kuwa doonyaha kiciya ay ka careysiiyaan sagxadda badda oo ay daruurta ka dhigaan biyaha.
Alaabada la soo uruuriyay ka dib qashinqubka waa in si wanaagsan loogu maareeyaa qaab aan waxyeelaynayn deegaanka. Waxa jira xulashooyin badan oo ay heli karaan milkiilayaasha marinnada iyo hawl-wadeennada markii ay wax ka qabanayaan shey wasakhaysan oo ay ka mid yihiin dheecaan furan, goobo meelayn oo duug ah, biyo-ku-maydhis farsamo, iyo adeegsiga tuubooyinka tuubbada maydhista
Mid ka mid ah faa'iidooyinka deegaanka ee lahaanshaha qodidda waxaa ka mid ah awoodda hawlwadeenka marinnada si ay u go'aamiyaan xawaaraha wax soo saarka qodista, taasoo u oggolaanaysa in qodku ku shaqeeyo heer hoose. Tani waxay ka horjoogsataa walxaha dib ugu noqoshada marinas ee ku yaal meel u dhow wabiga oo dhici kara marka la isticmaalayo qandaraasle.
Nooca saxda ah ee Qalabka Kala-baxa Marina
Go'aanka lagu iibsanayo qashin qubka ama lagu qoro qandaraasle hubaal wuxuu ku xirnaan doonaa cabirka, goobta, iyo codsiga marina. Haddii aad qodi doontid marinnadaada sannad kasta, waa inaad iibsataa qashin si looga fogaado abaabul joogto ah iyo kharashaadka ka-goosashada. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xulashada meesha saxda ah, kala xiriir kooxdayada sales@dredge.com Ama wac + 1-410-625-0808.